नेपाल बाल संगठन पर्साका पदाधिकारीद्वारा सानो घर बाल गृहको स्थलगत अवलोकन
कृषि सहकारी संघ पर्साको शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न
महामारी र चाडपर्वमा पनि कालोबजारी, नागरिक समाजको भूमिका खोइ ?
छापामारीको २३ केजी सुन प्रकरण : राजश्व कार्यालयमा बुझाईयो सुन, अझै पक्राउ परेनन् सिन्हा
पर्सागढी नपाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागी ६९ करोड बजेट सार्वजनिक
लकडाउनको मारका बाबजुद तग्रिदै कृषक, स्थानीय सरकारको सहयोग विना एक्लो प्रयासले क्षति बेहोर्दै
प्रदेश सरकारले छठपछि प्रदेश प्रहरी भर्ना लिने
शब्दमा समाज परिवर्तन गर्न सक्ने कला हुन्छ,
असार १५, २०७७ गीता भण्डारी
नेपालको पूर्वी खोटाङ्गमा जन्मिएकी सरु बस्नेत हाल बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वाड न ७ स्थित बसोबास गर्दै आएकी छिन् । पिता लालबहादुर बस्नेत र माता डम्मर कुमारी बस्नेतको जेठो सन्तान हुन् उनी । सानै देखि परोपकारी भावना बोकेकी बस्नेतको जन्म २०४६ सालमा भएको हो । बारा जिल्ला निजगढ निवासी राजकुमार थापा सगँ वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएकी उनको एक छोरा र एक छोरी छन् । सानै उमेर देखि अध्ययन तथा लेखन कार्यमा रूचि भएकी बस्नेतले बाग्मती सेकेन्डरी स्कूलबाट एस एल सी उतिर्ण गरेकी छन् । स्वरकी धनी उनलाई फेसबुक तथा युट्युब मार्फत छन्दमा कविता वाचन गर्न भ्याइ नभ्याई छ हिजोआज । गजल, मुक्तक र कविता द्धारा साहित्यीक यात्रामा प्रवेश गरेकी उनले बिगत एक बर्ष यता छन्दमा कविता लेख्न सुरु गरेकी छन् । सानोछदा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, माधव घिमिरे, भानुभक्त आचार्यका कविता जति पढे पनि कहिल्यै नघाउने बस्नेत सादा जीवन उच्च विचारमा नै आफ्नो जिन्दगीको अस्तित्व लुकेको छ भन्छिन् । विश्वनै कोरोना महामारीले शिथिल बनाएको यस घडिमा साहित्यको अवस्था कस्तो छ ? लकडाउनको असहज परिस्थितिले साहित्य क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर यस साता मध्य नेपाल सन्देश पत्रीकाको लागि गरिएकोे विशेष कुराकानी ।
१) साहित्यको क्षेत्रलाइ लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ ?
कोरोना महामारीले विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको समयमा साहित्यको अग्र साहित्यकारलाई असर नपार्ने भन्ने त कुरै छैन । शब्दको खेतिलाई श्रोता सम्म पु¥याउन अथवा कुनै ठाउँमा भेला भएर साहित्यीक कार्यक्रम गर्न नसक्दा देशप्रेम वा समाज परिवर्तनको प्रयासको लागि कोरिएका शब्द सामाजिक संजालमै सिमित राख्नु परेको छ । भेला गोष्ठी आदि इत्यादिलाई नराम्रो असर पारेको छ । तर हामीले यस्तो असहज परिस्थिमा पनि ईन्टरनेटको माध्यमबाट लेखन कार्यलाई, तिब्रता दिएका छौ । विभिन्न अनलाइन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहभागी भैरहेको छु । कोरोनाको महामारीबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरालाइ लेखन मार्फत जनमानसमा पु¥याउने काम फेसबुकलाइभ र युट्युभबाट गरिरहेकी छु ।
२)साहित्यीक यात्रामा प्रवेश गरेको कति भयो ? कहाँ बाट प्रेरणा पाउँनु भयो ?
साहित्य प्रतिको मेरो रुची सानै देखिको हो । तर निरन्तर रूपमा कलम चलाउन थालेको लगभग ६ वर्ष जति भयो ।प्रेरणा नै भन्नू पर्दा नवज्योति साहित्य समाज एउटा साहित्यिक संस्थामा आबद्ध भएपछि सुरु गरेकी थिए । पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था साहित्यिक चौतारी नेपालमा जोडिएपछि भने मेरो साहित्य प्रतिको झुकावले तिव्रता पाएको हो । सुरूमा साधारण सदस्यबाट प्रवेश गरेको म अहिले साहित्यिक चौतारी नेपालको केन्द्रिय कोषाध्यक्ष पदमा छु ।
३)शब्दले कुनै हतियार बिना नै युद्ध जित्न सक्छ ! भन्ने उक्तिलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
यो एकदमै सही हो । कलमले साधारण भाषामा तिखा व्यंग्यात्मक शब्दले प्रहार गर्न सक्छ । लेखकमा त्यो खुबी छ कि छैन भन्नेमा भर पर्छ । शब्दमा समाज परिवर्तन गर्न सक्ने कला हुन्छ, कतिपय कुराहरु जो ठुलो ठूलो हतियारले गर्न सक्दैन त्यहाँे शब्दको हतियार प्रयोग भएका छन । लेखाइको माध्यमले विभिन्न प्रकारबाट युद्ध गरिएका प्रमाण खोज्ने हो भने हामीसगँ प्रर्याप्त छन् ।
४) तपाईं कुन कुन विधामा रचना कोर्नुहुन्छ ? नेपाली बाहेक अन्य भाषामा पनि कलम चलाउनुभएको छ ?
विशेष गरी म छन्द कवितामा कलम चलाउन रुचाउँछु । यस विधामा कलम चलाउन थालेको लामो समय भएको छैन मात्रै एक वर्ष भयो । त्यो भन्दा अघि म गजल, मुक्तक लेख्थें । नेपाली भाषा बाहेक कहिलेकाहीँ मुड चल्दा फाट्टफुट्ट हिन्दी भाषामा लेख्छु । अन्यमा भने लेखेको छैन ।
५)लेखन कार्य भन्दा बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ ?
गृहिणी भएको कारणले अन्य कुनै काम गरेकी छैन । घर परिवारका सदस्यको रेखदेख सगैँ बालबच्चालाई समय दिएर बाँकी बचेको समय रचना लेख्ने र वाचन गर्नेमा नै खर्च गर्ने गरेकी छु ।
६) तपाईंले अहिलेसम्म कुनै कृति प्रकाशित गर्नुभएको छ ? आफ्नो कृतिको बारेमा केही भनिदिनुस् न ?
मैले पहिलो कृतिका रुपमा गजलसङ्ग्रह प्रकाशित गरेकी छु । (रोशनी गजलसङ्ग्रह) ,जसमा १०१ गजल समावेश गरिएको छ । यसभित्र स्वतन्त्र, बहर र छन्द गजल छन् । २०७६/०१/२० गते सो पुस्तकको विमोचन गरिएको थियो । दोस्रो सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गर्ने योजनामा छु ।
७) अन्त्यमा तपाईंले भन्नैपर्ने केही कुरा ?
साहित्य भनेको समाजको एउटा ऐना हो । यसले हरेक विषयमा बोल्न सक्छ । समस्या अनि समाधान दुबैकुरालाई औल्याउन सक्ने आधार शब्द नै भएको हुँदा साहित्यलाई सबैले माया गरौं । शब्द जन्माउन र ती जन्माएको शब्दलाइ समाज सम्म पु¥याउन साहित्यले ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ साहित्यको सम्मान गर्नु पर्दछ । साहित्यकारको लागि साहित्य नै जीवन हो । यसलाई सोच्ने र हेर्ने जुन हाम्रो समाजको सङ्कीर्ण सोच छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साहित्यले कलासाहित्य र भाषाको संम्बद्धन गरेको हुन्छ । साहित्य बिना कुनै पनि समुदाय वा राष्ट्र पूर्ण हुँदैन । यो कुरालाई हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु ।
सोमवार, असार १५, २०७७, ०९:०६:००
असार १६, २०७७ गीता भण्डारी
लकडाउनमा घरेलु बालश्रम बढेको छ ! बाल अधिकारकर्मी जया साह कोरोना भाईरसले उमेर नहेर्ने भएकाले बाल मैत्री क्वारेन्टाईन बनाई संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।
असार ३, २०७७ गीता भण्डारी
नेपाल बाल संगठन पर्साका पदाधिकारीद्वारा सानो घर बाल गृहको स्थलगत अवलोकन कार्तिक ४, २०७७